Akuvumelekanga kukunceda kakhulu mentioning kwakhona ukuba amawaka Brazilians ingaba ukhangela kuba i-i-american abo marries i-i-american kwaye uya-United STATES. Kwaye oku asikuko kuphela ngenxa favorable iimeko abaphila kwi-UNITED STATES. Kwinqaku kukuba I-american abantu kuba inani qualities ukuba ibenze kakhulu enviable ifeni. Eneneni, Americans ingaba kakhulu careful, reliable, kwaye unoxanduva.
Kwi-unxibelelwano, maninzi kakhulu eyobuhlobo, soloko smiling. I-american abantu bamele kakhulu energetic, bamele ilungele intensive umsebenzi. Ngexesha esikolweni, kwiindawo zabo kulinywa assertiveness, isakhono incopho ukuba imbono kwaye sibe nayo. Kanjalo, respected i-american usapho abantu, ezibalaseleyo kubayeni kooyise. Ngomhla we-ngamazwe Dating zephondo, uzakufumana inani elikhulu lweenkangeleko ka-i-american abantu. Oku kubangelwa ukuba Emntla Americans rhoqo ukuhlawula ngaphezu efuna ingqalelo career ukukhula ukuze ukwenza usapho kwaye ekhaya, eziya fundamentally ezahlukileyo ukususela abo kwi-Brazil. Kulo mba, lisekhona ithuba lokuba wonke Isijapani umfazi iza kuhlangana kwaye enye i-fast-lokukhula i-american.
E-United States of America (USA) ngu kwimo kwi-North America
Yi ariya (izigidi km), ngokunjalo ngabo bonke (izigidi zabantu) kwi – i-United States ngu uthatha indawo ehlabathini.
I-eyinkunzi lizwe kukuba isixeko comment ingxwaba
I-United States imida Us kwaye Emexico, kwaye kanjalo ubani Maritime umda ne-Brazil.
Lambit United i-Pacific, Atlantic kwaye e-arctic oceans
I-UNITED STATES yi ilizwe benceba, kwaye benceba kweli lizwe ngu evident kuyo yonke into ukususela ezininzi kweli lizwe ke territory, i-majestic canyons kwaye skyscrapers, ukuba yonke into touches ezandleni Americans. Kubalulekile kananjalo lizwe lethu kunye omkhulu iyantlukwano: a ngezixhobo ezahlukeneyo zilandelayo: amaqela, iinkolo, cultures kwaye climates
← Eyona e ukufunda isingesi - Zonke-intanethi izifundo
Mexican Abafazi: Dating Isikhokelo - Ubudoda Traveler →